एक SEO विशेषज्ञ बन्न चाहानुहुन्छ? Semalt एक उत्तर प्रदान गर्दछ
के तपाइँ तपाइँको साइटलाई खोज इञ्जिन नतीजाहरूमा राम्रो स्थानमा राख्न चाहानुहुन्छ? यदि यो त्यस्तो हो भने, त्यसोभए तपाईंले खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनको इन र बहिष्कार सिक्नु पर्छ र एक एसईओ विशेषज्ञ बन्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। यसको लागि, तपाईंले बिभिन्न तरिकाहरू र रणनीतिहरू सिक्नुपर्नेछ जुन तपाईंको साइटको स्तरलाई ठूलो हदसम्म सुधार गर्न सक्दछ। तपाइँको एसईओ कौशल मा लगानी को लागी केहि दिनहरु मा तपाइँ को लागी परिणाम प्राप्त गर्नेछ। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको विभिन्न युक्तिहरू र तरीकाहरू सिक्नु हो।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक रॉस बार्बरले एक मांग कसरी SEO विशेषज्ञ बन्ने भन्ने बारे यहाँ वर्णन गर्दछ।
SEO मा डुबकी लगाउनुहोस्
सर्वप्रथम, तपाईंले एसईओको आधारभूत कुरा सिक्नुपर्दछ, र यो सम्भव छ जब तपाईं यसको बारेमा विभिन्न वेबसाइटहरू र पुस्तकहरूमा पढ्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, Yoast आधिकारिक ब्लग मा जानुहोस् SEO के हो भन्ने बारे विचार छ र कसरी तपाइँको साइटलाई खोज इञ्जिन नतीजाहरूमा दर्जा दिन। तपाईं राम्रो तरीकाले एसईओमा डाइभ गर्न मोज र खोज इञ्जिन ल्यान्ड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गर्न र एसईओ विशेषज्ञ बन्न यी वेबसाइटहरू हुनुपर्दछ किनकि ती हामीलाई खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसनको बारेमा धेरै लेख र जानकारी प्रदान गर्छन्। ट्विटर र इन्स्टाग्राममा केहि SEO हरू अनुसरण गर्नुहोस् र उनीहरूको प्लेटफर्महरूमा के साझेदारी गर्छन् राम्ररी अवलोकन गर्नुहोस्। तपाइँ पनि खोज इञ्जिन अनुकूलन को बारे मा फेसबुक समूह मा सामेल र समुदायहरु भित्र अन्य विशेषज्ञहरु द्वारा साझा अपडेट अपडेट गर्नु पर्छ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम जाँच गर्नुहोस्
खोज इन्जिन अनुकूलनको बारेमा बिभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि अनलाइन उपलब्ध छन्। तपाईं तिर्न वा भुक्तान गरिएको कार्यक्रम मार्फत SEO सिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईं एसईओ ब्लगहरू र वेबसाइटहरू पनि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ विशेषज्ञहरूले आधारभूत र उन्नत एसईओको बारेमा धेरै जान्न बिभिन्न सुझावहरू र युक्तिहरू साझा गर्छन्। योआस्टले केहि एसईओ आधारभूत पनि प्रदान गर्दछ र नियमित रूपमा बिभिन्न आगन्तुकहरूका लागि लेख लेख्छ। जो मानिसहरू एसईओ सिक्न चाहान्छन्, विभिन्न ट्यूटोरियलहरू इन्टरनेटमा उपलब्ध छन्। उदाहरण को लागी, मोज र खोज इञ्जिन ल्याण्डले उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै एसईओ-सम्बन्धित सामग्री प्रदान गर्दछ। तपाइँ एसईओको आधारभूत कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ, कसरी उत्कृष्ट वेब सामग्री लेख्न र तपाइँको वेबसाइटको समग्र रूप सुधार गर्न, कसरी खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनको टेक्निकल पक्षहरूको साथ ग्रिप गर्ने र तपाइँको वेब पृष्ठहरूमा संरचित डेटा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारे जान्न सक्नुहुन्छ।
दुई प्रकारका SEO विशेषज्ञहरू
त्यहाँ दुई प्रकारका खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन विशेषज्ञहरू छन्, र तपाईं तिनीहरूमा एउटा विचार हुनुपर्छ: विकासकर्ताहरू जसले सबै मार्केटिंग रणनीतिहरू जान्दछन् र मार्केटर्स जसले वेबसाइटहरू कार्यान्वयन गर्न कोडहरू प्रयोग गर्छन्। SEO लर्निंग सजिलो हुन्छ जब तपाईंलाई यी दुई प्रकारका विज्ञहरू बीचको भिन्नता थाहा छ। केही पाहुना पोष्टिंग र गुणवत्ता लेख लेख्न जिम्मेवार छन्, केहि सामाजिक मिडिया मार्केटिंगमा फोकस गर्दछ, जबकि अन्यले ब्याकलिks्कहरू सिर्जना गर्न र तपाईंको साइट क्रलिंगमा धेरै ध्यान दिन्छ।
चारैतिर SEO विशेषज्ञ बन्नको लागि, तपाइँ यी दुई SEO विशेषज्ञहरु र तिनीहरूले कसरी राम्रो तरिकाले आफ्नो कर्तव्यहरु को प्रदर्शन को बारे मा सबै कुरा जान्नु पर्छ। साथै, तपाईं कामको प्राविधिक र गैर-तकनीकी पक्षहरूसँग परिचित हुनुपर्छ। यो भन्न सुरक्षित छ कि एसईओ बन्न केहि समय लाग्नेछ, त्यसैले तपाईले केहि चिन्ताको चिन्ता लिनु पर्दैन। इन्टरनेट को दुनिया मा सफलता प्राप्त गर्न बस आफ्नो ज्ञान को विस्तार र विस्तार गर्नुहोस्।